WiFi na Cgbọ ala? Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchekwa Onwe M Amaghị M
Otu n’ime ihe okomoko nke m na-enwe na ndụ bụ ọmarịcha ụgbọ ala. Anaghị m aga ezumike dị oke ọnụ, m bi na agbata obi na-acha anụnụ anụnụ, enweghịkwa m ihe omume ntụrụndụ dị oke ọnụ… yabụ ụgbọ ala m bụ ihe m na-eche. Ana m anya ọtụtụ kilomita kwa afọ ma na-enwe mmasị ịkwọ ụgbọala na-aga ebe ọ bụla na-aga n’ime ụbọchị ole na ole.
Cargbọala m nwere 3 HD ihuenyo wuru na - otu ihuenyo mmetụ na njikwa na nke dị na azụ oche ọ bụla n'ihu. N'ime afọ 3 gara aga, ekwenyere m na m jiri naanị otu ngebichi na oche azụ once mgbe nwa m nwanyị nọdụrụ n'azụ oche na njem. Gbọ ala ahụ nwere ihe ọkpụkpọ DVD, ihe ntanetị / vidiyo na oche azụ, redio satellite na OnStar. E nwere maapụ n'elu ikpo okwu nke etinyere n'ime njikwa.
N'ihu m n'ihu oche ndị ahụ bụ iPad m na iPhone m na chaja ndị dị mkpa na njikọ USB na sistemụ ụgbọ ala m. N’azụ oche, enwere m laptọọpụ m. Bluetooth na ejikọ ekwentị m na sistemụ.
Ozugbo ikpe biri maka redio satellite, Ahapụrụ m ya. iTunes redio na egwu dị na iPhone m na-enye ezigbo ọgaranya site na njikọ USB site na Bose gburugburu ụda sistemụ n'ime ụgbọ ala.
The ikpo okwu map chọrọ nkwalite site na DVD kwa afọ nke na-efu ihe karịrị $ 100 iji mee ka eserese ngosi gaa na nke ọhụhụ. Anaghị m eji ha n'ihi na m na-eji Google Maps na ozi kọntaktị m niile, nchọta ịntanetị, na kalenda m jikọtara ọnụ.
Gbọ ala ahụ bịara nọmba ekwentị ya na anaghị m arụ ọrụ… ọ bụ ya mere m ji ama ma jiri njikọta Bluetooth (ọ na-arụ ọrụ zuru oke).
Gbọ ala ahụ nwere esịtidem 40Gb ike-draịva na m nwere ike ịnyefe egwu site na USB, CD, ma ọ bụ DVD… ma ọ bụghị site na ama m. Enwere m obere CD ole na ole na-ebu ibu nke m na-anaghị ege ntị.
My Ndenye aha OnStar na-agwụcha n'oge na-adịghị anya ma ana m echesi echiche ike banyere ịghara ịbanye maka ọrụ na-aga n'ihu. Anaghị m eji ya… maka ihe ọ bụla.
Ebe ọ bụ na iOS emelitere, enwere m nsogbu na ekwentị m na-agaghị amata na ụgbọ ala. Gbọ ala ahụ enweghị nlele, ihe ụlọ ahịa ngwa, ma ọ bụ ya seamlessly iwekota na ndụ m… mana ekwentị m na-eme.
Ugbu a GM dị na-agbakwunye wifi na ụgbọ ala ha dị ka nhọrọ. m -ama nwere wifi… site na hotspot na iPhone na iPad m. Mgbasa ozi wifi ụgbọ ala etinyela m n'akụkụ. N'èzí onye isi oche GM dị ka onye Telecom, enweghị m ike ịchọpụta ihe kpatara ha ji agbada n'okporo ụzọ a.
Anaghị m ewere ụgbọ ala m ebe niile, Ana m ewere ekwentị m ebe niile.
iPad ire na mbadamba nkume na-akarị desktọpụ ọ bụla n'ebe ahụ. M na-agụ ụfọdụ ozi ọma na Apple na-arụ ọrụ na-eweta ihe iOS interface ka ụgbọala n'ime afọ ole na ole sochirinụ. O doro anya na gam akporo nwere ike iru ebe ahụ. Ihe m na - enweghị ike ịghọta bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ na - ahụ maka ụgbọ ala na - achọ ka ha rụọ ọrụ n ’otu mgbe teknụzụ niile dị adị na aka m.
Ekwentị m abụghị ngwa maka ụgbọ ala m.
Achọrọ m dashboard na m nwere ike slide ekwentị m n'ime na-enyere a console na-egosiputa nkịtị ngwa na a ibu ihuenyo mmetụ. Achọrọ m ka keyboard ahụ nwee nkwarụ belụsọ ụgbọ ala ahụ na-akwụsị. Agaghị m enwe ike iwepu ekwentị ọ gwụla ma m nọ n'ogige ntụrụndụ. Bibie ihe eji azụ azụ ma wụnye ihe nkwado ụwa maka mbadamba. Kwe ka ndị njem m tinye ekwentị ha ma ọ bụ mbadamba ha, gee egwu nke ha, ma ọ bụ jikọọ site na App na ụgbọ ala m iji gbasaa ihuenyo m (ụdị dịka AirPlay maka AppleTV). Ka m kpọọ egwu ndị njem ma ọ bụ egwu m.
Gbọ m bụ ngwa maka ekwentị m.
Achọrọ m ịchịkwa, melite, zụta ngwa, na-ege egwu, na-enweta map, ma ọ bụ kekọrịta ihuenyo m na ngwa m… Obughi ikpo okwu nke ugbo ala m. Achọghị m ka m kwụọ ụgwọ maka ọhụrụ data atụmatụ, ọhụrụ ekwentị atụmatụ, ọhụrụ music atụmatụ, ọhụrụ map data… mgbe m ama akwụ ụgwọ maka na m smartphones na mbadamba.
Naanị ihe m nwere ike ịbanye na ya bụ ihe njikọ onStar ma ọ bụ njikọ data satịlaịtị ndị ọzọ nke m ga-akwụ maka nkwado ndabere na mpaghara m si na sel nke onye na-ebu m. Ọzọkwa, batrị idobere maka ịgbanye na ngwaọrụ m ma ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ nọ n'ihe ọghọm na ike adịghị adị ga-abụ ihe kwesịrị ịkwụ ụgwọ.
Car emepụta ekwesịghị-arụ ọrụ na sistemụ na wifi Njikọta, ha kwesịrị-arụ ọrụ iji mee ka ụgbọ ala ahụmahụ na ngwa na ekwentị m… na mgbe a usoro na plọg ụgbọ ala na ekwentị m.
Mara: Foto sitere na Cadillac ma bụrụkwa usoro CUE ha.
Tags: ngwa orucadillaccadillac naụgbọ ala sistemụgm WiFiMobile na Mbadamba ụrọmobile ngwa ọdịnalamobile Bluetoothmobile hotspotsistemụ arụmọrụWiFi
Wzọ 6 ịkpọlite ​​afọ ochie
Ọkt 24, 2014 na 1:19 PM
Dị ka ọ na-adịkarị, ekwenyere m gị 100% na edemede a. Kpamkpam amamiihe review na ngosipụta nke ihe ụgbọ ala ụlọ ọrụ kwesịrị n'ezie na-eche banyere.
Ọkt 25, 2014 na 1:40 PM